Iindaba -Sizuza ithenda kurhulumente waseBolivia nge-1980 ii-microscope ze-pcs ngo-2019
Kwi-2019-02, umthengi we-Opto-Edu ovela eBolivia wasazisa nge-imeyile ukuba, ifayile yethu yethenda yeemodeli zemicroscope ezi-3 zizonke ii-1980 ii-pcs ziphumelele i-oda zikarhulumente zethenda!
Kufuneka siqinisekise kabini zonke iinkcukacha ezichaziweyo, amaxabiso, iindleko zokuhambisa kunye nexesha lokuhanjiswa kwezi modeli kwangoko, kwaye zonke izixhobo zokusebenzisa kunye nokugcina ezi modeli mazicatshulwe nazo. Iimveliso kufuneka ziprintwe kunye nelogo yoMthengi, kwaye uprinte incwadi yomxumi yokuyalela, inkosi ibhokisi yephakheji kufuneka iprintwe kunye nophawu lokuhambisa olufunekayo. Kwimali iyonke yeedola zaseMelika ezingama-205000, iinkcukacha ezininzi, kuxoxiwe ngazo kwaye zaqinisekiswa kwiveki enye ngabo babini.
Kwi-2019-03, iOpto-Edu ifumene intlawulo yedipozithi, kwaye iqala ngokuvelisa ngokukhawuleza. Umthengi ulungiselele ukutyelelwa kabini kumzi-mveliso wethu ukuze ahlole imveliso kunye nemeko yokusebenza nayo. Bonwabile kukubona iodolo yabo iveliswa ngokukhawuleza njengesicwangciso, kwaye lonke uhlolo lomgangatho luye lwadlula.
Ngo-2019-05, zonke iimpahla zigqityiwe kwimveliso, iibhokisi ezili-1418 zizonke, ngaphezulu kwe-64 CBM ithunyelwe kwizibuko laseNingbo, ilungele ukuthunyelwa elwandle. Umthengi wenze intlawulo yokuphumla epheleleyo ngexesha, ukuhanjiswa okwenziwe ukuba kuhanjiswe ngexesha nako. UOpto-Edu wenze isiQinisekiso seMvelaphi, isiQinisekiso soMzi woZakuzo kunye nesatifikethi seCCPIT sokungenisa abathengi. Kwiintsuku ezingama-40 kamva safumana ukuba umthengi ufumene iimpahla zikwimeko entle.
Umthengi wazise uOpto-Edu ukuba bonwabile ukusebenza nathi, kwaye bathumela ezinye iithenda ezinethemba lokusebenza ngempumelelo enkulu kungekudala!